Ndọrọ nke e nwere n’ịkwụA na - akọ n’ụfụ:
Nke a na - eme ka a ghara ịna - egbukepụ n’obodo a na - enwe n’ụzọ dị iche iche, n’ihi ya, ọ dị mkpa iji mee ka ọ̀tụ̀tụ̀ na mmetụta nke usoro ahụ.
N’ozuzu, a na - emepụta ákwà n’obodo ọ̀tụ̀tụ̀ dị ka ụba dị n’okpuru njọ, ma a pụrụ ime ka ọ̀tụ̀tụ̀ e nyere ya. Na-ekwe na ịnyịnyịnye ma ọ bụ arịa mmetụta mmepụ ma ọ bụ mmepụta mgbapụ ga-ebi ụhara ihe onwunwe, Ya mere, ọ bụrụ na ị chọghị ịkpata mmekọahụ ahụ, i kwesịrị ịma ego.
E ji ihe ndị e ji ígwè mee ihe n’akwụkwọ ụgbọ mmiri. Ọ pụrụ ịkpatara ya nanị mgbe ihe ndị siri ike dị ka nkịtị tebụl na ígwè a na - atọ ya.
N’ihi ịnọ pụrụ iche nke ihe ndị a na - arụ, ọbụna a sị na ihe ndị a na - enwe, a pụrụ ịnọgide na - eji ya eme ihe n’ụzọ dị otú a site n’iji obere ngwá ọrụ. N’ihi ya, nanị ịṅaa ntị n’ebe a na - eme ihe, agaghị emebi ihe.
Tụkwasị na nke ahụ, ihe ndị e ji ígwè na - enwe ike n’ahụ́ n’ahụ́ n’ahụ́, n’ihi ya, o kasị mma ka ọ ghara ịnyịnye n’ebe a na - akpọ asid na alkali.
Ochie:Ihe ndị mere e ji kwesị ịnọ n’ebe a na - akwụsị n’ahụ́
Ọzọrụ:Ịrụ ákwà e ji ákwà e ji ígwú
Na - eme ka a ghara igwe n’Ụzọ Mmaa
Kpụkọrọ ụkwụE ji akụkụ aluminium na - adịgide adịgide n’ụcha dịgasị iche iche, nke na - enwe ụgbọ mmiri, ọ na - akpata mmetụta pụrụ iche nke ahụ n’ụzọ dị iche iche n’ụzọ dị iche iche. A na - akpọkwa á...